Zava-miafina ny vehivavy tsara tarehy sy ny fahasalamana
ianao eto: Home
Matoky tena fanazaran-tena!
No Hataoko mahazo fahafahana hahazo ny fahasambarana sy ny fahombiazana? Ny olona dia mizara ho sokajy roa ny olona. Ny sokajy voalohany dia ahitana ireo, izay mitsahatra sambatra sy faly izy, hahomby eo amin'ny fiainana, ary any am-piasana. Fa ao amin'ny sokajy faharoa, dia ireo, izay hiandraikitra ny sokajy voalohany sy te-hampihatra ny sokajy voalohany. niaiky, isika tsirairay no fotoana, rehefa afaka mankafy ny tsara voninahitra mendrika, fa na noho ny fanetre-tena, na izahay indulged amin'izany noho ny tahotra ny.
More: Matoky tena fanazaran-tena!
Ny olona rehetra amin'ny fotoana ny harerahana manonofy foana ny fanahy, ny, toy ny mazava ranovelona no hihazakazaka noho ny tenan'i, fanasana amin'ny tsy havizanana, fa ny ratsy rehetra ny fihetseham-po sy ny fihetseham ny andro. ary, tena, ny tena tsotra fanahy dia toy izany "Mpanasitrana" manohitra adin-tsaina, ary raha mitombo ny eo amin'ny fitondrana izany im-betsaka? Ary raha ny fandehany zokiolona fanahy, izay mahay manome ny fihetseham-po tonga lafatra, fifaliana, Izany manasitrana ny vatana sy, Farany, manaisotra ny harerahana.
More: ranonorana ambony
fikarakarana vatana amin'ny fahavaratra
Summer vatana dia iharan'ny fitsapana roa: taratra manimba taratra masoandro sy hafanana avo. Mba hiarovana manohitra taratra, mila mandinika tsara ny safidy ny fitaovana fiarovana, ary koa ny mampihena ny fotoana lany amin'ny masoandro, intsony 1,5-2 ora isan'andro.
Ao amin'ny fikarakarana ny vatana mandritra ny vanin-taona mafana, mihaino, dia manontany. Raha ny hoditra dia manomboka mitombo marokoroko, avy eo mampihatra kirihitra, raha maina ny hoditra, nalehayte rano. fikarakarana vatana amin'ny fahavaratra dia tsy maintsy ho feno sy mitohy.
More: fikarakarana vatana amin'ny fahavaratra
Ny hoditra dia tokony ho mahafinaritra ny maso, Ary dia tsy maintsy miasa mafy. Rehefa dinihina tokoa, ara-pahasalamana tsy miankina hoditra foana amin'ny, inona no habetsaky ny vola no nandoa ny makiazy, Salons hatsaran-tarehy sy ny foto-drafitrasa, ary tsy tokony fikarakarana. Ho be dia be hatraiza izany dia miankina amin'ny hery, fiainana, mitondra fiara ianao. Izay ihany tokony ho fantatrao sy, raha te-tanteraka ny hodiny anjara ara-pahasalamana.
Care Body entana
Ny tsirairay amintsika dia nanome ny ampahany toetra ny ny hatsaran-tarehiny. Nisy olona nahazo tarehy volo matevina, ary izay – toy izany ny eyelashes halavan'ny, fa tsy misy ranomainty dia tsy ilaina na fantsika hatrany an-kibon matanjaka sy salama. Fa misy, ny fahitana izay tsy tia, eto, hoy izy ireo, tsy volo, ary ny totozy rambony. Anefa izany Tsy fanao atỳ. Ny hatsaran-tarehinao dia ny any ivelany, ary ny sitrapony anatiny, Miankina aminareo koa.
More: Care Body entana
pejy 1 avy amin'ny 2
Rehefa tapitra ny
Cosmetics ny fikarakarana ny vatana